इसीमाना सम्वाददाता बीरगंज १५ बैशाख २०७८ 87 पटक पढिएको
मृत्यु हुनेहरुमा धनगडा ४ सर्लाहीका ४३ वर्षीय पुरुष, बाराको सुवर्ण गाउँपालिका वडा नं. ७ का ३० वर्षीय महिला, पर्साको बीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. २७ की ६० वर्षीय महिला, रौतहट राजवाराकी ५० वर्षीय महिला र पर्साको बीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं ७ रामटोलका ४५ वर्षीय पुरुष रहेको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सरोजरोशन दासले बताउनु भयो ।
सबै जनाको उपचारको क्रममा नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । मर्नेहरु अधिकांशमा उच्च निमोनिया रहेको नारायणी अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट लहर चलेसँगै स्थानीय प्रशासनले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न १६ गते बिहान ४ बजेदेखी २२ गते राती १२ बजे सम्मकोलागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।